pamusoro 7 ✩ Who made the biggest contribution to the crypto industry?
Ndira 9, 2018 arun
Satoshi Nakamoto – Bitcoin, misa Chain
the founder of Bitcoin and creator of unique Bitcoin client, vakuru mazita vanhu zvikuru vakaita mukuru Mipiro crypto indasitiri. Under achangopfuura kunyatsoongorora Goldstone, Mazuvano Satoshi Nakamoto muve kubva 980,000 kuti 1 miriyoni BitCoins. In December, bitcoin kwakaita kusazivikanwa musiki angadai $19.4 bhiriyoni kana zvave yechi44 rakapfuma munhu munyika. Kana bitcoin anoita kuva yose mari, Satoshi Nakamoto zvimwe kwaizova vakapfuma murume munyika. Asi iye akavanda pasi rekunyepedzera pamusoro Satoshi Nakamoto achiri asina kuzivikanwa.
Chatinoziva ndechokuti White Paper “Bitcoin: A Pakuda-to-Nyatsotarira Electronic Cash System” rakabudiswa pasi rekunyepedzera pamusoro Satoshi Nakamoto musi October 31, 2008. This White Paper akarondedzera zvakazara decentralized gadziriro zvigadzirwa mari, izvo haana zvinoda chero pati rechitatu. The Profile pamusoro Website of P2P Foundation rinoti Satoshi Nakamoto ane makore 42 okuberekwa mugari Japan, uye rinoita kubatana kuti bitcoin.org. Pamugumo 2010, Satoshi akazivisa kuti akanga kusiya kukurira “zvinhu zvinokosha zvikuru.” Kubvira ipapo pakanga pasina basa akamiririra Satoshi Nakamoto. Ichi mashoko zvose zvakanga kunganzi yakavimbika; vamwe ndiyo fungidziro uye guesswork.
Nick Szabó – Cryptography, Cryptocurrencies, Smart zvibvumirano
is a famous cryptography specialist and a researcher in theoretical computer science. Ndiye wokutanga vakasuma pfungwa “ngwara chibvumirano ” mu 1996, izvo zvinoita nokugoverana zvinhu pasina kushandisa kumapati rechitatu. mu 1998, Szabó vakagadzirawo mashandiro nokuda decentralized-digital mari uye akaritumidza “ikakuruma goridhe.” Hazvishamisi kuti vatori dzakawanda crypto musika funga iye Satoshi Nakamoto.
Szabó akazivisa kushora wake SegWit2x, waiva raizoitirwa muna Bitcoin pomumbure rokupedzisira kwematsutso. Akatsanangura zvakaoma forogo of Bitcoin samambure, Bitcoin Cash, sezvo “centralized sock puppetry.”
Last November, Szabó uye mutsvakurudzi Elaine Dove akatanga kushanda Inzira nokutuma Bitcoin kwema pamusoro redhiyo anonongedzera. Nzira iyi wakatangwa panguva Scaling Bitcoin Conference muSan Francisco senzira yokuchengetedza samambure kubva zvinogona yokurwiswa firewalls, samambure pakashama, kana zvimwe kudzora decentralized network kuti inogona kushandiswa inoti kana foni Makambani.
ari kunyanya kuzivikanwa somumwe yokutanga bitcoin yeshoroma, a.k.a. Bitcoin Jesu, izvo hazvishamisi kubva Ver akatanga bhizimisi iri bitcoin kare muna 2011. Zvinokosha kucherechedza kuti Ver munhu anoshamisa chaizvo kunyange tsika crypto nyika. mu 1999, pashure pegore kudzidza, akawisa kubva De Anza College achitsigira kuitisa basa chairo. mu 2005, akatongerwa mwedzi gumi mujeri nokuda kutengesa firecrackers (pamutemo muUnited States) musi eBay. mu 2006, Roger akatamira Japan vakashora American citizenship. mu 2012, akava mumwe havaoni ane sangano asiri purofiti, Bitcoin Foundation, kuti nokupa "fananidza, chengetedza, nekusimudzira kushandiswa Bitcoin cryptographic mari kubatsira vanoshandisa pasi pose. "Mazuva ano Ver ari mutariri cryptocurrency wallets basa, Bitcoin.com
Mumakore gore, zita Roger Ver kakawanda akazviratidza vezvenhau nokuda kutanga cryptocurrency itsva, Bitcoin Cash, chaakanga inotsigira zvikuru ikozvino. Maererano zvaanofunga, Bitcoin Cash ari “chechokwadi bitcoin” inotsigira tsika Satoshi Nakamoto.
ndiyo yechipiri rinofarirwa kupfuura kukwikwidza nekuda musoro “zvechokwadi” Satoshi Nakamoto. mu 2011, akava mumwe rokutanga altcoins, Litecoin, yakabuda somugumisiro forogo muna Bitcoin Network. Vanhu vari kufungidzira kuti Litecoin ave “sirivha kuti bitcoin kuti goridhe.” mu 2013, Lee akatora chinzvimbo chebasa Director pa Coinbase, huru cryptocurrency pakakwirira. asi muna 2017, akasarudza kusiya kambani pfungwa Litecoin kusimudzirwa.
Over gore, ari cryptocurrency zvazvingava vakakura nenguva kupfuura gumi, uye nhasi kuruoko $255. In December, Charlie Lee akazivisa kuti akanga atengesa Litecoins ake ose kuitira kuti hapana munhu aigona vachimupomera kukanganisa mutengo nokufamba. Akasimbisa kuti akanga asiri kuenda racho uye vaizoramba kupedzera nguva yake yose basa iri.
Tony Trappers – BraveNewCoin
mumwe bitcoin muzvinashawo uye investor uye Ex-Vice President pa JPMorgan Chase-zvinozivikanwa mu crypto vemunharaunda. Trappers zvakurukurwa rokutanga blockchain vaevhangeri vaitsigira michina kune vakawanda kubva 2013. Ane akabudirira Blog, Podcast, ari Youtube Channel, uye kupfuura 80,000 vateveri musi Twitter. CoinTelegraph kazhinji rinobudisa mashoko ake uye zvinhu. Mukuwedzera, mu 2014, Trappers akava Musoro Research pa BraveNewCoin.
Maererano Trappers’ tsvakurudzo kuti yakabudiswa September rokupedzisira uye inobva exponential kukura bitcoin vanoshandisa, panozopera 2018, bitcoin mutengo ane zvinogona kuti kupfuura $100,000 maka. kare, Trappers waiti, panozopera 2017, bitcoin kuti kuyambuka $15,000 maka, izvo hatina kuchengeta musi December 17. Trappers criticizes mazuva zvigadziriswe zvokurera mari kuburikidza ICO pachena, sezvo 90% pamusoro ICO mabasa vari “chete hype.”
ndiye co-akatanga rimwe remasangano cryptocurrency muzvirongwa, Ethereum, uye ayo chizvarwa cryptocurrency, zvinoti Eteri. mu 2013, Buterin rakabudiswa cryptocurrency White Paper yakavakwa pamusoro blockchain, apo vanokwanisa kushandisa vakachenjera zvibvumirano kuti vavape mikana yakawanda yakasiyana.
Kubva pakutanga kwegore, inoenzanirana Eteri ikawanda 57 nguva, uye Buterin vakabatana Rating of American Forbes “30 pasi 30.” Bloomberg yaisanganisira Buterin ari mazita 50 vakawanda vanhu zvakakurumbira 2017, uye Forbes Russian yaisanganisira kwaari mazita 100 vakawanda vokuRussia nesimba remakore.
Gore rapera, Buterin akava mumwe Entrepreneurs vashoma vakasangana President Putin panguva St. Petersburg Economic Forum. Nezvokuzadziswa kukurukura havasi kuratidzwa, asi pashure musangano uyu, Zviremera Russian akaita U-dzoro pamusoro blockchain rwokugadzira uye cryptocurrencies, vachidanidzira blockchain inonakidza zvigadzirwa akafanira kuteerera. Uyezve, zvikazikamwa kuti Ethereum akanga kuenda nokuparura Joint purojekiti pamwe Vnesheconombank (YEPAINDANETI); Sberbank akabatana dzakawanda chirongwa Enterprise Ethereum Alliance (EEE), iyo kare kunosanganisira zvinopfuura 200 makambani, uye akava wokutanga Russian Bank pa EEA.
ndiye co-muvambi uye vaimbove CTO pa Ethereum, uyo kushandurwa kwokutanga Ethereum White Paper rakanyorwa Buterin ive chaizvoizvo achimhanya chirongwa. Zvino Wood misoro kambani Parity Technologies, izvo anovandudza Software nokuda blockchain network. Ndiyewo co-muvambi ane startup Polkadot, iyo anovandudza dzakati kuti achabvumira kuvandudzwa zvakarukwa scalability kuti mukuru kugarisana oga uye voruzhinji blockchains.
The 2017 gore zvakava kuomera Wood. Pakutanga kwegore, boka akabudirira zvakabudisa Parity 1.5, ane weekly Ethereum Network yeGmail.END_STRONG. Asi pashure mavambo akanaka, pakati kwegore, Parity Technologies nezvinetso zvakakomba.
Last July, ari wallets vakanga hacked. The hackers akawana kapukanana iri chibvumirano ne multisignature, izvo akavabvumira kuzoba 153,000 ethers (pamusoro $32 miriyoni panguva). Parity akasunungura ane yoku- shanduro akangwara chibvumirano kugadzirisa dambudziko iri. Asi, mumwe dzinonetsa tsikidzi, iyo anogara muraibhurari kuti Rinotarisira pfungwa wallets, akanga dzakaonekwa muna November. Somugumisiro а programmer kuti chikanganiso, kumativi $152 miriyoni akanga chando muna Parity vanoshandisa’ nhoroondo.
Maererano Wood, zvose vanoshandisa’ digitaalinen zvinhu zvakachengetwa pachikuva takachengeteka zvachose, asi T zvisingaiti asi kuti muvakweve kubva samambure. Zvinokosha kucherechedza kuti pakati nechando zvinhu zvakanga $98 miriyoni yaiunganidzwa Polkadot startup kuburikidza ICO.
Inonyanya kufarirwa shanduro ndiani chaizvoizvo shure zita Satoshi Nakamoto vari zvinotevera:
Nick Szabó - musayendisiti mumunda kombiyuta nesayenzi, cryptography, uye mutemo, uyewo mutsvakurudzi kuti akachenjera zvibvumirano uye cryptocurrency.
Charlie Lee - Musiki Litecoin.
Neal King, Vladimir Oksman, uye Charles Bry - nevanyori bvumidzwa chikumbiro, akadana “Updating uye kuparadzira encryption kiyi.”
Michael Klare - kudzidza cryptography muna College muDublin.
Hal Finney - mumwe cryptography nyanzvi.
Dorian Nakamoto - mugari kuUnited States (California) chakangomuka Japanese.
Craig Wright - wokuAustralia muzvinabhizimisi.
Elon musk - yakakurumbira billionaire, musoro Tesla uye Space X, uye nhengo Board pa SolarCity
Vose, kusiya Craig Wright, kuramba kwavo vechigaro wokutanga cryptocurrency. zvichida, ndiwo rakanakisisa piece nhau nokuda crypto pamusika nokuti Nakamoto akabata 5% pamusoro BitCoins zvose. saka, Nakamoto, kana achida, aigona yekudyidzana kukanganisa bitcoin mwero uye crypto musika.
Muridzi NYSE kanda ...
Previous Post:Blockchain News 9 Ndira 2018
Next Post:Blockchain News 10 Ndira 2018